INew Scream Tv Show uhlaziyo lomntu
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo INew Scream Tv Show uhlaziyo lomntu
by admin Aprili 7, 2014
ibhalwe ngu admin Aprili 7, 2014
Inguqulelo yeTV yeScream ekugqibeleni iphosa kwaye idubula umqhubi wabo. Umtya weTV Ubambe iinkcazo zomlinganiswa eziya kusetyenziselwa ukwenza iskripthi. Ukulandela kunye neemovie, uthotho lweScream TV lubonakala ngathi lunabalinganiswa abakwishumi elivisayo.
IHarper Duval: Inzwakazi eneminyaka elishumi elinesithandathu "engenisa kancinci kwaye inobukrelekrele ukuba ingabhabhathane ekuhlaleni" kodwa nangona kunjalo uye wachongwa sisihlwele esidumileyo ukuba sibe sesabo. "Uziva enetyala lokuba uye wemka waya kumhlobo wakhe osenyongweni u-Audrey," kodwa ubuncinci unobuhlobo 'be-Gilmore Girls'-esque kunye nomama uMaggie ukuze angaphambuki engqondweni.
U-Audrey Jesen: I-BFF yangaphambili ye-Haper ichazwa njenge "ntombi enomdla kabini yomfundisi waseLuthere" "okhangeleka ngakumbi kunokuba emhle." Eli "loner lobugcisa" liphupha lokuba ngumenzi bhanyabhanya kwaye labelana ngokusondelelana nobuchwephesha uNowa.
UNowa Foster: Oyena mntu amphalaza imbilini yakhe u-Audrey “uyile, ubukrelekrele kwaye unolwazi lobuchwephesha ngokwaneleyo ukuba abe ngu-Steve Jobs olandelayo.” Ngethamsanqa kuye, unoburharha ("la John Cusack ebusheni bakhe") omnceda ukuba ahambe kwiiholo zesikolo sakhe samabanga aphakamileyo. Ngapha koko, uNowa unalo ulwazi lweencwadi, iimuvi, umabonwakude, iiapps, njl.
UMargaret "Maggie" Duval: Umama kaHarper, ekwiminyaka yakhe yokuqala ukuya kwiminyaka yama-40 ubudala, ungumhloli wezonyango edolophini, “yingcali yesayensi esele ikhulile edlala ngobuhle bayo.” UMaggie uchitha ixesha lakhe elininzi ezama ukwenza into yokuba utata kaHarper wabashiya. Ewe, ufihle “imfihlakalo yobomi bakhe bangaphambili.”
Ibhalwe nguJill Blotevogel (I-Ravenswood, Isiqithi saseHarper, Eureka), umqhubi wenqwelomoya uqala ngevidiyo ye-YouTube ehamba ngentsholongwane, ethi ikhokelele kwiingxaki kulutsha olungu-Audrey kwaye kubonakala ngathi isebenza njenge "Isiseko sokubulala esivula ifestile kwidolophu [yakhe] eneengxaki."
Ucinga ntoni ngokuKhwaza kuguqulwe kube ngumdlalo weTV? Sazise kumagqabantshintshi.
Kwaye ngako konke ukukhala KWABALANDELI be-SUPER phaya. Jonga le ngqokelela imangalisayo:
Zonke iimuvi ze-SCREAM zibandakanyiwe kwiiNkqubo zoQokelelo ezikhethekileyo, kunye nohlelo lweSCREAM 2's's Collector's Edition ezifumaneka kuphela kule seti yebhokisi. Idiski ekhethekileyo inamaxwebhu asemva kwemiboniso, iimvavanyo zescreen, ukuphuma, kunye nenqaku elikhethekileyo leGumbi lokusika elvumela ababukeli ukuba bahlele imifanekiso ekhaya. Iimpawu ze-DVD-ROM zibandakanya iscreensaver, umdlalo we-trivia, isikrini kunye noluhlu lweefoto.
Cofa apha ukuthenga!
Ukoyikeka kukamabonwakudeMTVUthotho lwamanqaku
Ividiyo ye-Hilarious Ibonisa into onqwenela ukuba yenzeke 'kwabaFayo abahambayo'!
Izizathu ezili-10 zokuBukela iHolliston: Ixesha elipheleleyo lesibini